Waa kuma Laacibka uu Zlatan Ibrahimovic ka taageero xiddigaha waqti xaadirkan ciyaara kubadda cagta, muxuue ku sifeeyay? – Gool FM
Waa kuma Laacibka uu Zlatan Ibrahimovic ka taageero xiddigaha waqti xaadirkan ciyaara kubadda cagta, muxuue ku sifeeyay?
(Milan) 23 Jan 2020. Zlatan Ibrahimovic ayaa ka dhawaajiyay xiddiga uu aad u taaageero haatan, isla markaana uu jecel yahay hannaankiisa marka loo eego dhammaan xiddigaha ugu wanaagsan kubadda cagta waqti xaadirkan.
Zlatan ayaa la weydiiyay laacibka uu daawado, isla markaana uu aad ula dhacsan yahay qaab ciyareedkiisa xilli jawabtiisu ay noqotay mid aan qarsanayn oo cad kaddib markii uu si dhib yar u sheegay magac xiddig aan ahayn Messi iyo Ronaldo iyo waxa uu ku doortay.
Waxaa warbixintaan idiin soo jeedinaya Shaafici Maxamuud Shaafinho ee ka daawo muuqaalka hoose:-
Aubameyang oo ka jawaabay dalabka ay Kooxda Barcelona ku doonayso saxiixiisa… (Miyuu ogolaaday inuu aado Camp Nou?)